Waa la daabacay01.06.2022
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Lacagaha barbaarin-horaadkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaqa isticmaalidda adeegyada caafimaadka dawladda ka aqri bogga Adeega caafimaadka ee Finland .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSosiaali- ja terveysministeriö
Lacagaha daryeelka caafimaadkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Kharashaadka daawada daryeelkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dhgeeraad ah ka sii aqri bogga Maktabadaha .
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga Kaalmada dhaqaale ee qoyska .
Qaar kamid ah sicirka ee gudaha FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Buug-sannadeedka istaatiistikada ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan deegaanka ka aqri bogga Deganaanshaha Finland .
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga Gaadiidka gudaha Finland .
Macluumaad ku saabsan canshuurista gaadiidkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa